China Okuqukethwe nokubaluleka kwepuleti legama lezimboni | Umkhiqizi Nomhlinzeki WeIHUHUA Weihua
I-Hard disk shell + ukusekelwa kwekhompyutha
ipuleti le-alum (ipuleti lethusi) + phrinta + isitembu
I-Alum plate + isitembu + okusanhlamvu kwe-CD + anodizing
I-Alum zinc alloy diecast + galvanize + ngopende
I-Alum + forge ebandayo + ngopende (anodize) + okusanhlamvu
insimbi + yethusi + etching + umdwebo + electroforming
Isitembu sokuqonda (Precision CNC)
I-Alum + CNC + Anodized
I-Alum + Lathe + CNC + Anodized
I-Alum + Sturb Forging + cnc + Anodized
I-Optical Coating + PVD Plating + Ukufafaza
Inqubo Yokuklama Ye-Nameplate
Okuqukethwe nokubaluleka kwepuleti legama lezimboni | WEIHUA
Ipuleti legama lezimboni ngokuvamile libhekisela kwilebula eligxiliswe kumkhiqizo ngemuva kokuthi umkhiqizo ufakwe emakethe, okunikeza abasebenzisi imininingwane efana nokuhlonza uphawu lwentengiso lomkhiqizi, ukwahlukanisa umkhiqizo, nokukhumbula ipharamitha yomkhiqizo.
Ipuleti legama lezimboni lisetshenziselwa ukuqopha imininingwane ethile yezobuchwepheshe yomkhiqizi nezimo zokusebenza ezilinganisiwe, ukuze zisetshenziswe kahle ngaphandle kokulimaza okokusebenza.
Izinto zokwenza ama-nameplates ezimboni zingama-plateplate izihlonzi zensimbiokungewona awensimbi: amapuleti wamagama wensimbi afaka i-zinc alloy, ithusi, insimbi, i-aluminium, insimbi engagqwali, njll. -i-grade, ehlala isikhathi eside, futhi engenakho ukugqwala.Non - plastic metallic, acrylic organic board, PVC, PC, iphepha, njalonjalo.
Okokufaka emikhiqizweni kagesi nemishini, amapuleti wamagama ezimboni aqukethe imininingwane yomkhiqizo ojwayelekile kanye nezidingo ezikhethekile zobuchwepheshe.
Ngabe iqulethi lensimbi lezimboni liqukethe ini?
1. Ucezu lwegama kumele luphelele futhi lucace, futhi akumele kube khona imivimbo elahlekile.Umngcele weplate yeplate ubushelelezi futhi awunasiphetho;
2. Ipuleti legama kufanele liqukethe imininingwane efana negama lomkhiqizo, imodeli, amapharamitha kagesi, amapharamitha, umaki, inombolo yesitifiketi, usuku lokulethwa, inombolo yesitifiketi nomenzi;
3. Imininingwane edingekayo yokuxwayisa izonikezwa kupuleti legama, njengokuthi “Akuvunyelwe neze ukuvula ikhava ngogesi”, “Ukushaja nokukhipha endaweni lapho kungaqhuma khona”, njll.
Izindwangu zamagama ezimboni ziyadingeka kulwazi olulandelayo
1. I-logo.Ivumela abasebenzisi kanye nabafaki ukuba baqonde ngokushesha uhlobo lomkhiqizo, amaqembu ahambisana negesi / uthuli namazinga okushisa.
Inombolo yesitifiketi.Isitifiketi esingakhombisa umkhiqizo siyiqiniso futhi siyasebenza, gwema ukukhetha umkhiqizo ongumbombayi futhi ophansi.
3.Ifektri date.We singayazi impilo yesevisi yomkhiqizo ngokushesha, futhi sihlulele ukuthi kufanele sibuyisele inqwaba yemikhiqizo kusuka kumjikelezo wempilo.Vikela ukwehluleka kokusebenza ngenxa yokusetshenziswa kwesikhathi eside.njengegobolondo isikulufa sokugqwala noma ukulahleka, okunzima ukugqwala, ukubopha indandatho ukuguga akukwazi ukufinyelela umphumela wokufaka uphawu.
4. Imiyalezo exwayisayo.Ingavumela abasebenzi bokugcina nokusebenzisa ukugwema ukusebenza okungafanele okubangelwa ukulimala kwemishini.
Ukufingqa, i-nameplate yensimbi yemikhiqizo yezimboni yilebula ebaluleke kakhulu, futhi imininingwane engaphelele noma engalungile izodala izinkinga ezingadingekile endaweni esetshenziswayo nakubasebenzisi.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana zensimbi, i-nameplate eyenziwe ngezifiso, njll., Sicela ushayele iWeihua Technology. Sineqembu elisezingeni eliphakeme, elisebenza kahle kakhulu, futhi elinobuchule bokuthuthukisa ibhizinisi elingahlangabezana ngokugcwele nezidingo zakho.
Isikhathi Iposi: Nov-14-2020
Hot Products - Ibalazwe - AMP Ucingo ngokunemba UKWAKHA futhi nginyathela pvt.ltd , ukucacisa yezwekazi nginyathela , ukunemba kuyafa nokugwaza, CNC machining ukucacisa izingxenye ,